KASHIFAAD: Ciidanka Abuu Mansuur oo saddex shuruud ku xiray in lagu biiriyo ciidanka DFS -News and information about Somalia
Home Warkii KASHIFAAD: Ciidanka Abuu Mansuur oo saddex shuruud ku xiray in lagu biiriyo...
KASHIFAAD: Ciidanka Abuu Mansuur oo saddex shuruud ku xiray in lagu biiriyo ciidanka DFS
Warar dheeraad ah oo naga soo gaaraya degaanadda Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in xoogaga Abuu Mansuur ay shuruudo ku xiraan in lagu biiriyo ciidanka dowladda Soomaaliya.
Talaabadan ayaa waxay qeyb ka tahay ujeedada socdaalka ra’iisul wasaare Xasan Cali Khayre ee magaaladda Xudur, halkaasi oo Arbacadda maanta ah si diiran loogu qaabilay looguna soo dhaweeyay.
Illo wareedyo ayaa sheegaya in shuruudaha ay kala yihiin; in ciidanka hogaankiisa qeyb kanoqdaan iyo in dhaamaan hubka gaadiidka kala duwan ciidamada Iyo saanadooda loo dhameystiro.
Lama hubo hadii xukuumaddu aqbali doonto shuruudahan iyo in kale, maadaama ay ku jiraan kuwa qaarkood khatar ah.
Mukhtaar Roobow Cali [Abuu Mansuur] ayaa tan iyo bishii December ee sanadkii 2018-kii waxa uu Muqdisho ugu xiran yahay dowladda federaalka Soomaaliya oo ka reebtay doorashadii Koonfur Galbeed.
Next articleSAWIRRO: Somalia Iyo Masar Oo Isfaham Ka Gaaray Heshiis Ay Wada Saxiixdeen
Ilhaan Cumar Oo Ka Hadashay Burburinta Ciidanka Kenya Ee Xarumaha Shirkadda...